အသက်ထိပ်စီးပြောင်းသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချောအောင်ရဲလင်း
19 Jun 2018 . 2:30 PM
ဒီကနေ့ဟာဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားချောအောင်ရဲလင်းရဲ့  မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ရဲလင်းကို ၁၉၈၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာမွေးတယ်တဲ့ အတွက် ဒီကနေ့ဟာ သူ့ရဲ့  အသက် ၃၀ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကမွေးနေ့ဆုတောင်း ကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေပို့ထားတာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မိတ်ကပ်မထက်ကလည်း “ Happy Birthday မင်းသား” ဆိုပြီးတော့ အောင်ရဲလင်းကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်ကလည်း “ချစ်တပည့်အောင်ရဲလင်းကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ပါစေ” ဆိုပြီးတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။
ဒီနေ့ကဟာ အောင်ရဲလင်း အတွက်ထိပ်စီးပြောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တာကြောင့် ဘုရားတတ်ပြီး ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ ပုံလေးနဲ့ သူ့အသက် ၃၀ ပြည့်မွေးနေ့မှာဆုတောင်းပေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာပဲ သူ့ရဲ့ ဆုတောင်းလေးကတော့ လူသားအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ရေးသားထားတာကိုလည်း သူ့ရဲ့  လူမှုကွန်ရက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
မွေးနေ့မှာ ဘုရားသွားခဲ့တဲ့ ပုံ
“peaceful my full of 30th birthday (19.6.88 ) under the embrace of..” Lord Buddha ” n all my thanks goes to the ones who wish for me….
I wish all of the people…tobhealthy…wealthy n…happy”
Photo Credit: Aung Ye Lin Facebook
အသကျထိပျစီးပွောငျးသှားပွီ ဖွဈတဲ့ မငျးသားခြောအောငျရဲလငျး
ဒီကနဟေ့ာဆိုရငျတော့ သရုပျဆောငျမငျးသားခြောအောငျရဲလငျးရဲ့ မှေးနဖွေ့ဈပါတယျ။ အောငျရဲလငျးကို ၁၉၈၈ခုနှဈ ဇှနျလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာမှေးတယျတဲ့ အတှကျ ဒီကနဟေ့ာ သူ့ရဲ့ အသကျ ၃၀ နှဈပွညျ့မှေးနဖွေ့ဈပါတယျ။ သူ့ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေမှေးနဆေု့တောငျး ကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျပျေါကနပေို့ထားတာတှလေညျး တှရေ့ပါတယျ။
မိတျကပျမထကျကလညျး “ Happy Birthday မငျးသား” ဆိုပွီးတော့ အောငျရဲလငျးကို မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ဒါရိုကျတာကွညျဖွူရှငျကလညျး “ခဈြတပညျ့အောငျရဲလငျးကောငျးကြိုးလိုအငျဆန်ဒပွညျ့ပါစေ” ဆိုပွီးတော့ မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားတာကိုတှရေ့ပါသေးတယျ။
ဒီနကေ့ဟာ အောငျရဲလငျး အတှကျထိပျစီးပွောငျးတဲ့နတေ့ဈနဖွေ့ဈတာကွောငျ့ ဘုရားတတျပွီး ကုသိုလျပွုခဲ့တဲ့ ပုံလေးနဲ့ သူ့အသကျ ၃၀ ပွညျ့မှေးနမှေ့ာဆုတောငျးပေးကွတဲ့သူတှေ အားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျကွောငျးကိုရေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာပဲ သူ့ရဲ့ဆုတောငျးလေးကတော့ လူသားအားလုံးကနျြးမာခမျြးသာပွီး ပြျောရှငျတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ရေးသားထားတာကိုလညျး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ တှရေ့ပါတယျ။
မှေးနမှေ့ာ ဘုရားသှားခဲ့တဲ့ ပုံ